बाबुरामलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्ने जति सबै बेकामे लफंगा हुन् (भिडियो अन्तर्वार्ता) | नेपाल आज
बाबुरामलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्ने जति सबै बेकामे लफंगा हुन् (भिडियो अन्तर्वार्ता)
रवीन्द्र मिश्र मट्यांग्रा हुन् भने बाबुराम पृथ्वी
मङ्गलबार, ३० जेठ २०७४ गते प्रकाशित
नयाँ शक्तिका नेता मदन राई यौनसम्बन्धी उदार धारणाका कारण बेला बेला चर्चामा विवादमा पर्ने गर्छन् । कृषिका विज्ञ राई राजनीतिलाई पनि शुक्ष्म ढंगले केलाउँछन् । वैकल्पिक शक्तिका रुपमा नयाँ शक्ति अगाडि आउन खोजेको छ । तर पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा नयाँ शक्तिलाई जनताले पत्याइदिएनन् । वैकल्पिक शक्ति, निर्वाचन, संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको वरपर रहेर उनीसँग नेपाल आजले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको मुख्यमुख्य अंशहरुः
वैकल्पिक शक्तिका रुपमा नयाँ शक्ति भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तपाईको नयाँ शक्तिलाई न जनताले पत्याए, न कार्यकर्ताले । धेरैले छाडेरै गए नी ?
हो केही साथीहरुले छाडेर जानु भयो । निर्मल भट्टराई, हरिराम रिमाललगायतले छाडेर जानु भयो । म त भन्छु उहाँहरुले ठीक गर्नुभयो । किनभने उहाँहरु यहाँ फिट हुनु भएन । उहाँहरुको बानी व्यहोराले गाह्रो भएको होला । निर्मलजी एमालेमा जानु भयो । किनभने उहाँका लागि एमाले नै ठीक हो । जहाँसम्म रामेश्वर खनालको कुरा छ, उहाँ नयाँ शक्तिबाट अलग भए पनि अन्त कतै जानु भएको त छैन । उहाँ फेरि आउन पनि सक्नु हुन्छ । मुमाराम खनालले छाड्नु भयो ठीक गर्नुभयो । उहाँ नयाँ शक्तिमा बसिरहनु भएको भए शान्ति हुँदैन थियो ।
नयाँ शक्ति गठन गर्ने बेलामा ३५ जना थियौं । अहिले लाखौं छौं । आउने जाने भइरहन्छ । कुनै नौलो विषय होइन राजनीतिमा ।
बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्तिमा लगेर मान्छेहरुलाई फसाउनु हुन्छ भन्ने गरिन्छ । रवीन्द्र मिश्रले एउटा अन्तर्वार्तामा म पनि झन्डै फसेको भन्नु भएको छ नि ?
रवीन्द्र मिश्रलाई म राम्रोसँग चिन्छु । हुन त म यो देशको कस्लाई चिन्दिनँ होला र ? रवीन्द्र मिश्रले लेख्नु भएको किताबमा मेरो पनि कुरा छ । रवीन्द्र मिश्रले बाबुराम भट्टराईको विषयमा गर्नुभएको टिप्पणी अत्यन्त सतही, केटाकेटी पाराको र बाबुराम भट्टराईले यो देशलाई दिएको योगदानको अवमूल्यन गर्ने किशिमको छ । मेरो धारणामा त बाबुराम भनेको पृथ्वी हो । रवीन्द्र मिश्र मटेंग्रा मात्रै हो । उहाँले ल्याएको साझा पार्टीमा आउन भन्नु भयो । उहाँको मैले छ घण्टा कुरा सुनेको छु । मिश्र सभ्रान्त परिवारमा जन्मेका हुन् । नेपाल भनेको ७० प्रतिशत गाउँले बनेको छ । गरिब छन यहाँ धेरै । उहाँले यो देश दुनियाँ केही बुझ्नु नै भएको छैन ।
बाबुराम भट्टराई ३५–४० वर्षदेखि राजनीति गरिरहुन भएको छ । रवीन्द्र मिश्र त छ महिनाको हो । रवीन्द्र मिश्रले राम्रो गर्नुहोस त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन । शुभकामना नै छ ।
नेपालमा तीन वटा लोकतान्त्रिक पार्टी चाहिन्छ । एउटा विवेकशील पनि हो । अर्को साझा हो । नयाँ शक्ति नभए पनि केही छैन । तर वैकल्पिक शक्तिका रुपमा आएका यी पार्टीहरु बालक जस्ता छन् । केही जान्दैनन् । नयाँ शक्ति त एक विचार हो । यसमा बाबुराम भट्टराई त केही दिनका नेता मात्रै हुन् । उनी त मरिहाल्छन अब । उनीभन्दा म पाँच वर्ष जेठो छु । म पनि मर्छु ।
मेरो चाहना के मात्रै हो भने नेपाल समृद्ध होस । नेपालीको शिर संसारमा ठाडो होस । यति चाहना हो । यस्तो सोचको सट्टा त्यो त फस्यो, डुब्यो भन्न जरुरी छैन ।
भनेपछि रवीन्द्र मिश्रले लगाएको आरोप हावादारी हो त ?
हावादारी होइन, यो त अपराध हो । हामीजस्तो मान्छे बसेको ठाउँमा फसे भन्नु त अपराध गर्नु हो । यसअर्थमा रवीन्द्र मिश्र अपराधी हुन् । म रवीन्द्र मिश्रलाई सोध्न चाहन्छु, भन्नुस हामी बाबुराम भट्टराईसँग कसरी फस्यौं ? के आधारमा भन्नु भयो कि हामी भट्टराईसँग फसेको भनेर ? मिश्रको पार्टीमा नजाने जति सबै फसेको हुन्छ ?
उहाँ त लामो समय पत्रकारिता गरेका मान्छे, समाजसेवा गरेको मान्छे............
अर्काको पैशाले समाजसेवा गरेँ भन्न सहरको मान्छेले मिल्छ ? लुगा कपडा दिएर समाज सेवा हुन्छ ? लुगा बुन्न सिकाउनु पर्छ, लुगा सिलाउन सिकाउनु पर्छ । त्यो हो समाजसेवा । चामल बाँडन होइन धान फलाउन सिकाउनु पर्छ । मूल कुरा एकातिर छ, चामल र कपडा बाँडेको कुरा किन गर्ने ? सुविधाभोगी जागिर, प्रचारमुखी जागिर खाएर दुनियाँलाई मुर्ख बनाइएको हो । नत्र त्यसको नतिजा हेर्नुस न के छ थाहा भइ हाल्छ नी ।
बाबुराम भट्टराईले हालै प्रचण्डले हतियार ‘र’लाई बेच्ने योजना बनाउनु भएको कुरा सार्वजनिक गर्नुभयो । पहिले चाहिँ किन यसो गर्नुभएन ?
अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले हतियार बेच्ने कुरा गर्नुभएको बाबुरामले भन्नु भएको हो । ‘र’ लाई बेच्ने कुरा कतै छैन । ४ हजार हतियार बिक्री गरेको भए त्यसले कालन्तरमा आफैलाई सिध्याउने खतरा थियो । तर बाबुराम भट्टराईले ति हतियार व्यवस्थापन गरेर मुलुकलाई अर्को दीर्घकालीन सशस्त्र द्वन्द्वबाट जोगाउनु भएको छ ।
विवेकशील र साझा पार्टीको उदयलाई कसरी लिनु भएको छ ?
एकदम राम्रो । आउनु पर्ने थियो आए । अहिलेको अवस्थामा त मेरो सबैभन्दा ठूलो सहानुभूति विवेकशीललाई छ । रञ्जुले पनि राम्रो गरिन् । उनी मेरो नातिनी उमेरकी मान्छे हुन् । मेरो आशिर्वाद नै छ ।
साझामा रवीन्द्र मिश्रले बोलेको कुरामा त म सहमत छैन । मुमाराम खनाल पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ । मेरै मान्छे हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि । किशोर थापासँग चाहिँ मेरो त्यस्तो होइन । तर उहाँ काठमाडौंको मेयर हुन योग्य मान्छे हो । एसएलसीमा बोर्डफस्ट पनि हो । बाबुराम जस्तै हो तर बाबुराम जत्तिको त होइन । सहरको विकास गर्ने योजना भएको विज्ञ पनि हो । काठमाडौंको मेयर हुने मान्छे त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । तर गर्ने के ?
जहाँसम्म रवीन्द्र मिश्रले फस्ने कुरा गर्नुभयो त्यो त केटाकेटीपन मात्रै होइन, अज्ञान मात्रै होइन, पागलमात्रै होइन, अपराधि पनि हो ।
एउटा आरोप लाग्ने गर्छ कि नयाँ शक्ति भारतले जन्माइदिएको हो । के भन्नु हुन्छ ?
एमाले पनि भारतले जन्माएको हो । माओवादीलाई भारतले जन्माएको हो । कांग्रेस त भारतमै जन्मेको हो । भनिआएको कुरा गर्नुलाई के अनौठो मान्ने ? भन्नलाई त जे पनि भने भइगयो नी ।
म, बाबुराम भट्टराई, रामेश्वर खनाल महिनौसम्म बसेर छलफल गरेर, गृहकार्य गरेर नयाँ शक्ति जन्माएको हो । भारतले नयाँ शक्ति जन्माएको हो भने भारतबाट बाबुरामले पैशा पनि ल्याउनु पर्ने । खै पैशा ल्याएको देख्दिनँ । म पनि उनीसँगै विदेश गएको छु , त्यहाँ पनि कसैले पैशा दिएको देखिनँ ।
बाबुरामलाई सामाजिक सञ्जालमा के के भनेर गाली वर्षन्छ नी ?
बाबुरामलाई त भारुराम नै भन्छन् नी । बाबुरामलाई क्षमता भएर नै भनेको हो । सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्नेहरु सबै गलत हुन् । हामीले विश्लेषण गरिसकेका छौं । कसैको आलोचना गर्न विषय चाहिन्छ । अरु केही आरोप छैन । भारत जोडेपछि भइहाल्यो । त्यही गरिएको हो । बाबुरामलाई सामाजिक सञ्जालमा जसले जसले गाली गर्छन् ति सबै लफंगा हुन् । असल राम्रो मान्छेलाई त गाली गर्ने फुर्सद नै हुँदैन । उ आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छ । बेकामेहरुले गर्ने हो गाली । गरुन के फरक पर्छ ?